यी हुन् गोप्य अंगहरुमा ट्याटु खोप्ने नेपाली सेलिब्रेटीहरु,कस्को कुन ठाउँमा छ ट्याटु ? - Khabarsansar.com
यी हुन् गोप्य अंगहरुमा ट्याटु खोप्ने नेपाली सेलिब्रेटीहरु,कस्को कुन ठाउँमा छ ट्याटु ?
गायिका सरस्वती लामाको ‘वक्ष’मा खोपिएको ट्याटुले निक्कै चर्चा पायो । उनको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालदेखि अनेक ठाउँमा निकै भाइरल पनि भयो । तर, त्यहाँमात्र होइन उनले अन्य गोप्य ठाउँमा पनि ट्याटु खोपाएको खुलासा गरिन् । भनेकी छन्,‘ट्याटु त मैले नदेखाउने ठाउँमा पनि खोपेकी छु । नेपालमा ट्याटु खोप्ने चलन जति बढेको छ, त्यति नै यससम्बन्धी कलाकारको माग पनि । खासगरी मिडियामा आउने सेलिब्रिटीले गोप्य अंगमा ट्याटु खोपेपछि तस्बिरहरू भाइरल भए । ट्याटु खोप्नु सौख पनि हो । तर, कतिपय नेपाली अभिनेत्रीका ट्याटु खोपेका तस्बिर बेला बेलामा सार्बजनिक हुदा आलोचना पनि सहनु परेको छ ।
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको ‘वक्ष’मा खोपिएको ट्याटुको तस्बिर भाइरल भयो । यसमा उनको आलोचनामात्र भएन, प्रष्टीकरण पनि दिनुपरेको थियो । उनले ट्याटु बनाउनेले नै तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पारेको बताउँदै आवेग समेत पोखेकी थिइन् ।
एकजना ट्याटु बनाउने कलाकारका अनुसार युवतीहरूका गोप्य अंग र आकर्षित बनाउने ठाउँमा ट्याटु बनाउने काम आउँछ । कतिपयले तिघ्रा, पाखुरा, वक्ष, नाइटो, पेट वा त्यसका वरिपरि र ढाडमा समेत खोपाउने गरेका छन् । उनी भन्छिन्,‘यो एक प्रकारको आइडेन्टीटी पनि बन्दो रहेछ । त्यसैले यस्तो रिक्वेस्ट आउने गरेको छ । कलाकारले मात्र होइन अरु धेरै ट्याटु सौखिनहरुले आफ्नो शरिरको बिभिन्न ठाउँहरुमा पनि खोप्ने गरेका छन् ।’ सूर्य, ड्रागन, स्वतन्त्रता, बाघ, सिंह वा अनेक आकृतिका ट्याटु खोप्नका लागि अनुरोध हुने गरेको छ ।
ट्याटु विश्वबजारमा १५ औं शताव्दी देखि नै खोप्ने चलनमा आएको बताइन्छ । अमेरिकालगायत युरोपियन मुलुकहरूले यसलाई प्रचलनमा ल्याएका हुन् ।जापानले खासगरी सैनिकहरूलाई युद्धमा जाँदा नचिनिने बनाउनका लागि र आफ्नो निकट साथीहरुको पहिचानको लागि ट्याटु खोप्ने प्रचलन थियो । तर अहिले आधुनिक विश्वमा आउँदा ट्याटु ख्याती प्राप्त फेसन बनिसकेको छ ।